War deg deg ah: Baarlamanka Cusub ee Jubbaland oo lagu dhowaaqay (Akhriso) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
War deg deg ah: Baarlamanka Cusub ee Jubbaland oo lagu dhowaaqay (Akhriso)
Aug 12, 2019 - 25 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale ) Guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa caawa shaaciyay Liiska xubnaha cusub ee Baarlamaanka labaad ee Jubbaland.
Guddiga Madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka ayaa sheegay in shanta beelood ee hab qeybsiga 4.5 lagu sameeyay xubnaha cusub ee Baarlamaanka labaad ee Jubbaland.
Arintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo Mudooyinkii dambe uu taagnaa Muranka ku aadan Qaabka loo soo xulayo Xildhibaanada, iyadoo Inta badan Odayaasha dhaqanku ay ku gacan saydheen, Sidoo kalana Musharixiinta ayaa kalsoonida kala noqday gudiga Doorashooyinka, Lama Hubo inay hada Aqbali doonaan Baarlamaanka Cusub.
Kkkk waxaan ku arkaa nin ku xiran saldhiga police oo Leeds ka tagay(71)oo saaxiib la ahaa nin LEEDS ku xanuunsan kana mid ahaa gacan yaraashii Axmed madobe,balse ay isku dhaceen ninkaan xirnaa waa Marexan kan leeds ku xanuunsan waa Ogaden saaxiibo ayay ahaayeen waligood. Maxaad ninkaa ula xiriirtaa ayaa la igu yastaa ayaa laga sheegay MP qasab ah baa la igu qasayaa kkkk yaan rumayaanaa?
Walaahi aniga ayaa kugu raacsan, Gedo oo ah gobolada Somalia ugu qanisan dhulka Somalida degto, in xitaa jid laami lahayn oo ah gobolka saddexaad oo dhul ahaan ugu weyn Somalia.
Waa ka ooyaa shacabka Gedo dhibka haysta iyo barwaaqada haystaan…
Mareexaan waa geelwas agoontii Kacaanka ah oo baran= Sidee isku debernaa inta isku tashano..
Waa daanyeer in dowlad caawiso mooyee aan weligood dad isku tashada noqon.
May Dhabayacada Puntland dega oo weligood dowlad ahaa, wax ka bartaan…..
Walaahi Majeerteen oo Gedo degi layaa in East Africa qabsan lahaayeen……..kkkkkkkkkk
Bal Gedo ka gaajood iyo waxa biyo sanadka dhan jiifa, Daanyeer Mareexaan.
ma aqli ka xun ayaa jira in Kismaayo la isku dilo sidii Xamar adoo Luuq, Baardheere, Buurdhuubo, Ceelwaaq, Beledxaawo iyo Garbaharey haysta?????
Waa daanyeer meesha nal ka daaran yahay dadka ku qabsada oo ogeyn waxa haystaan ayaga…..run
Ninkaan u dooraney inuu Shacabka Jubbooyinka mideeyo oo maamul loo dhanyahey u dhiso ayaa soo dhaafi waayey Qolkii Villa Xamar,
Axmed Cadde Garmadoobe hadduu helilahaa Leader xakameeyo Labada jid ayuu mid qaadilahaa, Jidkii Xaaf iyo Sakiin,
Ama Jidkii WAARE.
– Kheyre shaqow qabtee, Afmadow yaa tagaa
Car Jilib iyo Jamaame imow adiga iyo Kafiilkaada Kenya.
@ Land of Punt
Wixii la sheegaba waa inaad GARAB DHIGTO MAJEERTEN
– Sac ayaa Meel heblo ku jabey, WAXAA KA JAB xooganaa midkii Puntland
– Webiga ayaa biyo fatahey, waxaa ka fatahaad badnaa Toga Garowe
– Mr Google Saxaro cabire iga dheh
Walaahi Hartigii Kismaayo dhistay oo Majeerteen ugu badnaa oo guri kasta oo qadiim ah iska lahaa iyo Baajuuntii maanta laga qaad.
Cagdheer oo runtii dhulka degaan u leh ayaa tiri; edeb yeesha Kismaayo jooga laakiin Gedo ayaa ka qanisan Jubbada hoose.
Walaan Faanole iyo Jilib/Jamaame gaari karin Beledxaawo, Ceelwaaq, Ganacsi yaala iyo Baardheere iyo Markabley, Luuq Ganaane iyo Webiga jiinkiisa Buurdhuubo oo ah meesha Webi Jubba ugu xoog badan yahay oo cidi joojin karin..billion qubique meter per second….
Nin wax og ha kuu waramo.
Waa Daanyeer meesha nal ka daran yahay aada oo fahmin= Taada nal ka daar kulli adaa laguu imaan oo lagu baryin…..= isku kalsoonada oo daanyeerta argagixisada meel iska saara ma gartaan..
Ilkayar weligiin Cagdheer iyo Kablalax cirka kasoo dhacay ku hadaaqa…. Walaan Cagdheerta xitaa Harti wax u ogolayn. Kablalax kuye.
Fucking walaalaha Galguduud..kkkkkkkk
Cafis iyo ciid mubaarak😜
Adiga ii kaadi, caawa Mareexan ayaan tusayay in Luuq ilaa Saakow degaan, dhinaca Kenya Ceelwaaq ilaa Bedelxaawo degaan, Jubbaland yihiin dadka ugu degmooyin badan…run
In Cagdheer iyo Kablalax ku raftaan waxay ku tusaysaa in ayaga oo dhul qani ah haysta Kismaayo Cagdheer naga haysata ku hadaaqin, in ku aqli yihiin Habargidir…
Dabshid who the fuck cares Farmaajo, 4 sano ka dib bixin.
Farmaajo Mareexaan iyo Darood midna maaha…run
Waa Madaxweyne Somalia in Somalia mideeyo loo doortay xitaa Villada kama bixi karo….maqaarsaar.com
Xamar la idinka guur.. Farmaajo ayaa tusaale noogu filan, taas faham.
Weligaa ma deristay sida Somalida dhulka loo kala dego.
Waxaan Puntland usoo qaatay!
Sidee Gedo iyo dhul Mareexaan looga dhigay dhul isku filayn oo Kismaayo muhiim u tahay oo Puntland powerful u tahay aniga oo og barwaaqada taal Gedo.
Xoogaa ka feker meesha ka hadlayo…sxbkay dhunsaboow.
Weligaa Luuq, Baardheere iyo Buurdhuubo ma maqashay,….cidda Garbaharey iyo Caabudwaaq ku caan tahay, laakiin aniga wax kale ogahay..kkkkkkk
Waxaan oran jiray Puntland waa dhulka Somalia 3 meelood hal meel= 1/3.
Bal Gedo baro… Kismaayo hanoo dambaysee..
Waa gobolka Somalia 30 million oo qof ku filan..
Cadayn hayo, chineseka expert igu raacsan yihiin…..allow dadkaaga aqli sii..!
Maanta ka gaajaysan oo xitaa mira ku tuurto shaqo kaaga baah nayn…..
Dhulkaas barwaaqada ah, inta isku maqanahay ayaa cadow nagu maqan yahay.
Caawa waxaan Gedo uga hadlayaa waa siyaasadda LOP in Somalida baro dhulkooda.
Magaaloyinkaan iyo qayraadkooda xag biyo, koronto, beero iyo ganacsi cidda la yeelan karaan etc, ka fekera degaanka ku yaalaan iyo cidda degta.
Baardheere, Garbaharey, Buurdhuubo, Luuq, Baledxaawo, Ceelwaaq etc….you know what am I talking about..kkkk waa dhul Mareexaan majority ka yahay oo Kenya iyo Ethiopa deris la ah..Wabiga maro. Gobolka 3:aad Somalia dhul ahaan ugu weyn.. Waxaa ka weyn keliya gobol ahaan, Bari iyo Sanaag…prove me wrong. Waa beenta i dhaha.
Welina dad nidaam iyo isku tashi gaarin ah, dowlad usoo gurmata jirin..waa daanyeer agoontii Kacaanka ah.
Hadday aqli leeyihiin Ahmed Madoobe shaarubada dhulka ugu xirinkaraan…simply waxay oran karaan warkeena maqal ama Jubbada hoose oo Kismaayo, Afmadow, Jilib iyo Jamaame ah iyo Jubbada dhexe: Saakow iyo Buaale oo Alshabaab haysato ha kugu filnaato.
Aqoontaada kororso booweyaal.🖐😎
Doorashada Jubbaland aniga waxaan ka joogaa heer Pragmatic ah oo ah: cidna xigsan maayo ilaahow mid shacabka Jubbaland nabad kusoo dabaalabu keen,..haddaan awood lahaan lahaa; nin Jareer Weyne ah u keeni lahaa, waana sharafta iyo degenaashaha Jubbaland… Ahmed Madoobe in baxo jeclahay laakiin aniga dhulkii ma joogo, dadka jooga hadday soo celiyaan waan soo dhaweyn.
Haddii Ahmed Madoobe soo noqdo eed iyo colaad dowladda dhexe dhamaan mayso..
Marka anigu dibad ka jooge ahay.
Jubbaland waa extremly important region for Somalia weliba maanta oo Kenya isku haysano xuduudka Jubbaland meesha maro iyo Kenya.
Nin Kenya wadato I don’t trust him.
Runtii ma Mareexaan ma fahamsana inay gobol istaraatiiji ah majority ka yihiin…
Waa gobol fursad baacmushtari oo weyn leh…wuxuu isku xiraa saddex waddan…wuxuu yeelan karaa suuqyo waa weyn oo badeecaha lagu kala gudbiyo…..
Sidaan maqlay waxaa mara laba webi: Jubba iyo Daawad….
Markablay waa barta webiga Jubba ugu moolsan macnaha biyihiisu ugu xoogbadan yihiin waa halka madhruucii Faanoole la rabay in laga dhigo si korontada waddanka oo dhan looga dhaliyo…
Waxaa intaasdheer waa dhul beereed ciid wanaagsan…..wuxuu kaloo qani ku yahay xoolaha nool…..iyo in kaloo badan ma tirin karo….alla mareexaan ha fahamsiiyo barwaaqada Gedo taal….
Aan kula jabaqsadee shirkii ugu danbeyey ee ay
Yeshan belaha D marexan waxaa loogu duceyey
Inay xoga saran ka shaqaynta dowlada dhexe iyo
Casimada inay ku nagadan dorka danbana laga
Shaqeeyo sidey ku soo noqon lahayeen absame in
Loo daayo jubaland mamulkeda marka mamulka
Cusub ee jubaland baa laga rabaa inay horumariyan
Gedo iyo juboyinka dalku waa federal isku tashi baa
Loo bahan yahay
Sxb Gedo waa gobolka 3:aad Somalia 18;kii gobol.
Labo webi malaha ee Webiga Jubba ayaa marka Ethiopa marayo Webi Ganane Oromoda u taqaan markuu Somallia soo galo Jubba river loo yaqaan.. Malaha webiga Garissa mara ku qaldaysaa oo NFD mara oo Kenya ka yimaada.
Dhibka Koofur Somalia oo dhan haysta: maaha dad aabulan oo in isku tashadaan aaminsan.
Dowlad weligood wax u qabatay ma jiro..
They never learn isku tashada idinka.
Waana wareerka jira oo Alshabaab jinni oo dhan uga faaiidaysto.
Keligood maaha kasoo bilow Galmudg ilaa Raaskamboni.. Dowlad ma adeecaan ayaga nidaam ma samaysan.
Marka sidee qas looga bixin.
Ahmed Madoobe mar hadduu Kenya wato, I don’t trust him.
Waa maxay shir Darood aad la timid..
Sxb Somalia qabyaalad dal kuma dhisi karno.
Waa sheeko qaldan Mareexaanow Xamar aad,A Absame halooga dambeeyo Jubbaland.
Absame Afmadow iyo Kismaayo oo Harti ka xoogeen ayey haystaan meeye Somalidii dhulka kula noolaa Daroodka.
Dhulka malaha ma taqaanid From Saakow, Buaale, Jillib, Jamaame ilaa Dhoobley ka timaado Darood ma dego.. Jubbaland waa 5:ta Somalia saas ayey wax ku noqon kartaa ee turubka naga baadhee.
Mise warkaaga qalad u turjuntay!
Waan kugu raacsanahay: dalku waa federal in gobolwalba la horumariyo laakiin waa in cadaalad jirto oo qof walba xaqiisa helo.
Walaan cadaalad daro muddo dheer sii socon karin.
Taas Anigaaniga qor…
Mahadsanid…inaad i saxday…Geography expert baad tahay. Waa cajiib inaad qurbaha yaraan ku gashay haddana aad dhulka Soomaaliya si fiican u kala taqaan…
Wabiga Gaarisa mara waxaa la dhaha Tana River .
Gaarisa kuleyl badana. Tuulada Habaasweyne iyo mudhikaray baa ka sii kulul ee Gaarisa u dhow kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Sxb gaarisa xaaskeyga degan . Lolz
Kkkkk LOP ma aqaan micnaha ay leedahay waqtigan badan ee aad galisay qoraalkan iyo Gedo.
Waxaan u fahmay beentii iyo huuhaadii MJ in aan fahansannahay taa oo ah magaalo Somali oo dhan degan maxaad u dagaysaan taa miyaad ka hadlaysaa?Gedo waan deganahay sidaa si la mid ah ayaan Kismaayo u deganahay.Runtu Kismaayo maanta rag bay u shidan tahay waan hubaa in aanay adiga kuu shidnaandoonin,balse waan qiyaasi karaa walwalka ku haya Marexan oo Jubaland absolutely majority ah maanlituu kusoo boodo cadaalada ayuu marsiin.Halka la isku hayo waa Kismaayo Gedo halkaa iska dhig waxa ay tahay, cayaar waa galindanbe
@Dusha kkkk LOP ma yaqaane yuusan ku waalin at uu ku waxan yahay oo aan ka dhibsaday ayaa 100%wax Daarood la yiraahdaa in aanu jiray I agree that.
File list kale MP Jubaland,bales si caqli ah u fakaro Jubaland sidaa dan ma u tahay?
MJ iyagu waa ha holacdo maxaa iga galay 10 qofna sidoodii bay doon raacayaan sx LOP iyo dhabayacoo dhan.Ikadheer iyagaa iska qaribay maqaayadda that is the fact.
Cudqad Ilyar meesha ha keenin iyo kollay nin Dhabayaco ah hoos kuu jiidi maayo.
Waan kuu sheegay waxa Gedo uga hadlay oo ag in Somalia dhulkooda baro oo Gedo wax u aqoon mark khayraad noto Jubbada house.
Adna bad kale iyo bootso gashay,,yaa ku yiri Kismaayo ma lihid, waxaanba taagnahay waa 5:ta Somalia meel u dhaxay.
Aqligii Galguduud bad la timid iyo maalintaan xoog helo waa dagaal.
Yaa chancekaas ku siin.
Adigu reer Galguduud ayaa tahay orod reer Abtigaa Cayr la heshii hadaad aqli ku heshiisaan leedihiin.
Sxb wadankii anoo 15 jir ku socda ka imid, 15 jir waa guurdoon hadduusan doqon ahayn..kkkkk
waalid afka iyo dhaqanka Somalia aad u yaqaana waa i dhaleen anigana waa hobigayga in fahmo waxa Somalia isku haysato iyo taariiqdooda iyo geografigooda.
Xeerka 4.5 ee belaha ayaa dhigaya marexan isagoo
Ku fadhiya kursigii dalka ugu sareyey ee federal in
Uusan isu soo sharixi karin kursiga jubaland kolka u
Baneyo kan federalka waa u banan tahay inuu
Mamulo jubaland waa un intaas macnuhu markaa
Odayadii marexan waxay ugu duceyeen inay abid
Ku nagadan federalka
LOP kkk reer mudug 15 sano ma dhaafaan,qabyaaladna la weynaadaan.
Yaan cuqdad u qadaa,maxaan la qaadaa?
Waxba kama fahansanid waxa Somali isku hayso,was wax ugu fudud.
1-Siyaasad qabaail ah.
2-Afkaar kala duwanaasho.
Labadaas waad ku dhacday aurbahana waxba kama aadan faaiidine ku laabo Bali busle qorigaafana qaado.Caqli badnidaada adigoo Jubaland minority ku ahna waad ka hadli anita reer Galmudug baan ahay kkkk war qabyaalad iska daa hab civilize ah wax u sheeg aan kugu raacnee haddii kale noqo tuuggii dabarka muuqday sidaad horena u ahayd kkkkk
Kismaayo waa Caasumaddii Jubbaland sida ay Garoowe u tahay Caasumaddii Puntland. Ka warran haddaan ku iraahdo Garoowe Dashiishle yaanu cag soo dhigin kana hadlin ee Boosaaso ha iimaansadeen?. Caqli beeyo. kkkk
Sxb warka qoray adoon aqrin syaa seef iskala boodaysaa..kkkkk
Xaqeen ku qpray Kismaayo Mareexan ma imaaan karo. Kkkkll
In nin jareer ah from Gosha furaha Kismayo öoo dhiibo ayaanba rabaa..
Waa dad sas wada qaba, hadday nin Majeerteen hadlaya arkaan waxay moodin in Kismaayo kuu diidan yahay oo sheeko Kab&Lax wado .kkkkk
Sheekadii walaalaha Galguduud iyo isxambaar haddaad daysaan yaa dalka kala xiga. .😎
Rag ilma adeer baa iska yaqaan. Waxa aad tabliiqinayso nin garanaya baan ahay sxb.
Meejan Kismaayo anugu wax weynba uma arko, waxaa muhiim ah in laga gudbo anaa leh iyo ficiltan dhuleedkan baas ee maalaa yacniga ah.
Gobolkan wuxuu u baahanyahay maammul dadka u dhex ah oo u cadli fala, Gedo ayaa Soomaali oo dhan deeqda iska daa inta kalee, lkn inta ay nin jeebaddi ku jirto bahashu Lop-na waa runtii ku hayo, waa bilaash.